भेडाको उनजस्तो..... एउटा कथाको खोजीमा ......: केरुगं तथा स्वाप्रुवेशी मार्गको योजना तयार
केरुगं तथा स्वाप्रुवेशी मार्गको योजना तयार
काठमाण्ड़ौं, भदौ २५ - उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजेन्द्र महतोले चीनसँगको व्यापारलाई सहज बनाउन सीमा पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल भ्रमणमा आएका चीनको तिब्बत सरकारका उपाध्यक्ष देङ्ग साओगांगको प्रतिनिधिमण्डलसँग महतोले यो आग्रह गरेका हुन् ।
सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, विशेष आर्थिक क्षैत्र र सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि उद्योग मन्त्रीले आग्रह गरे । चिनियाँ पक्षले यो अनुरोधलाई सकारात्मक रुपमा लिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सीमाक्षेत्र केरुगं तथा स्वाप्रुवेशी मार्ग र तिब्बती क्षेत्रतर्फ पूर्वाधार विकासका लागि एक योजना तयार भइसकेको साओगांगले जानकारी दिएका थिए ।
सीमा जोडिएको भए पनि चीन र नेपालबीचको व्यापार पाँच प्रतिशतभन्दा न्यून छ ।
चिनियाँ व्यापार प्रदर्शनीलगायत विविध कार्यक्रममा भाग लिने क्रममा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल नेपाल भ्रमणमा छ । यही क्रममा मन्त्री महतो र चिनियाँ पक्षबीच व्यापार विस्तारबारे मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो । सन् १९८१ मा चीनसँग भएको वाणिज्य सन्धिको आधारमा व्यापार सञ्चालन भइरहेको छ ।
श्रोत: कान्तिपुर दैनिक, भदौ २६
तस्बिर : रसुवागढी नाकाबाट केरुंग जाने बाटो
Posted by Reality Bites, Nepal at 9:44 AM
लामो छैन लाङ्टाङ् रुट !
तामाङलाई ताज !!!
सम्झनाको सदरमुकाम : स्याफ्रुबेसी !!
शान्तिको आशामा : एक जोर आखा ।
पुगियो पार्वतिकुण्ड !!
चिजको चिन्तन एकैछिन् ।
गरिबीको रेखामुनि ।
दुर्लभ यात्रा महँगो पर्यटन
स्याफ्रुको स्याउजस्तो ।
चिज चाख्दै चन्दनबारी